GOCOSHADII SHACABKA EE SHARIIF & FARMAAJO [SAMAAN & XUMAAN] | Kismaayo24 News Agency
GOCOSHADII SHACABKA EE SHARIIF & FARMAAJO [SAMAAN & XUMAAN]
Saturday October 1, 2016 - 5:50 under Breaking News by admin
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa toddobaadkan Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya, waxaanna sidoo kale la filayaa in Muqdisho maalmaha soo socda uu soo gaaro Ex. R/wasaare Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo], waxaanna 2-da musharax ay dad badani qabaan in ay yihiin kuwa keliya ee tartamayaasha ka mid ah ee loo saadaalin karo in ay ka guuleysan karaan Madaxweyne Xassan Sheekh oo isna musharax ah; inkastoo dhinaca kalena ay jiraan dad aragtidaas khilaafsan.
Qaar ka mid ah SHACABKA waxaa ka soo burqanaya GOCASHO ay ku cabirayaan aragtida ay ka qabaan 2-da musharax o ah samaan & xumaan is-huwan.
Ex. R/wasaare Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo] waxaa lagu xusuustii intii uu R/wasaaraha ahaa inay is-qabteen Madaxweynihii xilligaas Sheekh Shariif, kaddibna Sheekh Shariif u yeeray, kana dalbaday inuu is-casilo.
Fasiraado kala duwan ayaa loo sameeyaa sababta keentay in Sheekh Shariif is-cisil ku yiraa Farmaajo, dadka qaar waxeey is-casilaadiisa u sababeeyaan Farmaajo oo ku guuleystay inuu si fiican u dhaqaajiyo hannaankii Dowladeed ee xilligaa, oo ciidamadii mushaar u qoray, ka horyimid qolyaha beesha caalamka ah ee Garoonka lagu qaabilo, kana dalbaday in ay yimaadaan Villa Somalia iyo tillaabooyin kale oo naf gelin kara soo kabashada hannaanka Dowladeed, hasse ahaatee xawaarihii uu ku socday Farmaajo ayaa waxaa dhibsaday Dowladaha deriska ah oo u arkay in qabrigii ay Soomaaliya ku hubsadeen uu ka soo saarayo Farmaajo, waxeeyna ka dalbadeen Sheekh Shariif inuu xilka ka qaado.
Sheekh Shariif markii uu Farmaajo ka dalbaday inuu is-casilo, Farmaajo waxaa u soo hiiliyey shacabka Soomaaliyeed meel kasta ayaana looga bannaanbaxay gudaha & dibedda. Waxaa dhacday [Xilligaa] in taariikhda markii ugu horreeysay muddo ka badan 26 sanno Muqdisho ay isugu soo baxaan tiradii ugu badneyd oo shacab bannaabaxayaal ah, waxaanna Farmaajo ay u sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay la dhintaan.
Farmaajo dadkii bannnaabaxayaasha ahaa ayuu la hadlay, wuxuuna u balanqaaday in aanu is-casili doonin.
Kaddib maxaa dhacay.?
Farmaajo waxaa looga yeeray Kampala-Uganda, intii uu Kampala u sii socday Muqdisho waxaa weli ka sii socday bannaabax. Dadweynihii oo tixraacaya balantii uu ka qaaday ee aheyd inuusan is casileyn iyaga oo qiireysan waxeey sii wadeen bannaanbaxooda, si ay dhiiragelin ugu noqoto.
Markii uu Kampala tegay waxaa lagu heshiiyey inuu xukunka ka dago oo Mareykankiisa ku noqdo, waxaanna jiray tuhun ahaa in xooggaa jeebka loo geliyey.
Farmaajo shacabkii u soo bannaanbaxay ee soo buuxiyey jidadka Muqdisho oo dhiigoodu dariiqa yaal ayuu Muqdisho ka duulay, una kicitimay Mareykanka, xittaa uma tacsiyeeyn shacabkii dartiis u dhintay, wuxuuna ku laabtay xafiiskiisii uu horay uga shaqeeynayey.
4 sanno kaddib inuu Muqdisho ku soo laabto isaga oo xil doon ah, haddana loo sacbiyo waxeey ka mid tahay [dhoohanaanta] shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed miyeeysan xaq u laheyn in ay helaan hogaamiyeyaal karti & waddaniyad kulansaday oo ka dhabbeeya rabitaanka shacabkooda.?
Maxaa lagu bogaadin karayaa FARMAAJO.?
Inkastoo madaxda Soomaalida marka xil Qaran loo doorto ay darka Dowladnimo hoos geeyeen reerahooda, haddana Farmaajo waa ka duwanaa madaxda kale, dadka ku hareereysan [intooda badan] isku qabiil ma aheyn, waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay siyaasi bisil, oo ka dhabbeyn karay haddii fursad la siin lahaa riyada iyo hamiga shacabka Soomaaliyeed ee ah inuu soo celiyo rajada ah; in Soomaalidu isku filan tahay, dadkeeduna awooddi karayaan iyada oo aaney ajnabi ku dhex jirin in ay soo ceshadaan Qaranimadooda.
Dadka ku dhowdhow Farmaajo waxeey leeyihiin waxaa ilaa hadda ka dhex guuxaya inuu noqdo Hogaamiyihii soo celiyey karaamadii & sharaftii Soomaalidu laheyd oo [Legacy] uu ka tago, riyadiisu waa intaas.
SHEEKH SHARIIF-KII 2009
Sheekh Shariif laftiisa & Soomaali badan oo daafaha dunidda ku dhaqan waxeey horraantii 2009 u aheyd waa-cusub, kaddib markii Sheekh Shariif oo xilligaa ka soo goostay saaxiibadiis [Asmara] fadhiyey si degdeg ah loogu doortay Madaxweynihii Soomaaliya, waxaanna dhacdadaasi ay aheyd mid agaasinkeeda & dhammeystirkeedaba ay gadaal ka taagnaayeen ashqaas & dowladdo ajnabi ah.
Sheekh Shariif oo aan horay xil-dowladeed u soo qaban wuxuu ku soo dhexdhacay marxalad adag oo ay ugu horreeyaan Alshabaab soo laba-kacleeyey oo dilal & qaraxyo joogta ah geysanayey, siyaasad qabiil ku dhisan, Dowladdo isu baheystay in Qaranka dhiig-baxaya ay god ku soo ogaadaan & shirqoolo kale fara badan oo dhinac walba ka furnaa.
Khibrad la’aantii haysay Sheekha & isaga oo aan helin la-taliyayaal aqoon u leh habka loo badbaadin karo dal intaas oo dagaal ah lagu hayo waxeey dhaxalsiisay in aan waxba la qaban magaca Dowladnimo-na loo isticmaalo sida NG0 lagu awr-kacsado.
Dadka dhaliila Sheekh Shariif waxeey leeyihiin ma ahan nin ku adkeysan kara go’aankiisa, oo hadduu culeys siyaasadeed ku yimaado saaxiibadiis ku dhegi kara oo difaaci kara. Raggii soo taban-taabay ee la soo dhintay markii ceyri la yiri kulligood xilalkii ayuu ka qaaday, waxaa raggaasi ka mid ahaa C/raxmaan Janaqoow, C/qaadir Cali Cumar, Daahir Maxamuud Geelle, waa shaqsi mabda’iisu yahay in tiisa keliya ay u meelmarto.
Sheekh Shariif maalintii uu xukunka ka dagay ayuu albaabka ka baxay, wuxuu ka fogaaday dalkii & dadkiisii, 22 September ayuu soo laabtay isaga oo leh: “Waxaan ahay murashax”.
Sida dad badani u aaminsan yihiin in Faarax C/qaadir yahay gacanta middig ee Madaxweyne Xassan Sheekh, uuna ka talo qaato, ayaa xilligii Sheekh Shariif xilka hayey dad badan waxeey aaminsanaayeen in Shariif Xassan uu ahaa ninka maskaxda u ahaa.
Dad badan oo Soomaali ah marka ay ka hadlayaan qaladaadkii uu sameeyey muddadii uu xilka hayey waxyaabaha ay cuskadaan waxaa ka mid ah:- Inuu ras-miyeeyey heshiisyadii Garowe 1 & Garowe 2 oo fure u noqday qiil mar walba Puntland ay Dowladda dhexe ku handado & isaga oo marqaati ka noqday magac-bixin aan loo dhammeyn oo loo sameeyey Garoonka Gaalkacyo oo loogu magac-daray C/llaahi Yuusuf oo dad badani ay aamisan yihiin inuu door weyn ku lahaa burburka Dowladnimadii Soomaaliya & isaga oo Soomaaliya ku soo hogaamiyey ciidamadii Itoobiya ee xusuuqa dalka ka geystay.
LA SOCO QEYBO KALE INSHA ALLAAH.